UMoscow - idolobha elikhulu, eheha abantu abaningi. Abaningi bathuthela lapha ukuze bahlale endaweni engapheli, omunye ufuna ithuba lokuthola imali. Bonke abantu badinga ukuhlala endaweni ethile. Labo abakwa-budget abavumelayo, bafune ukuthenga indlu edolobheni. Enye yeziphakamiso ezinjalo ezivela kumthuthukisi i-LCD "Birch Alleys". Isikhathi esithile iphrojekthi yaqanjwa kabusha ngunjiniyela ku-LCD "Ingqikithi Yengqikithi e-Bereza Alley".
Umthuthukisi wephrojekthi yinkampani "D-Invest", eyaqala ukwakha iphrojekthi enkulu. Ukuze kusetshenziswe iphrojekthi ye-Berezovaya Alley, iMoscow inikeze isakhiwo sezwe esisemkhawulweni womuzi esifundeni esiphezulu seNyakatho-mpumalanga, emgwaqweni wezakhiwo zezoLimo neBirch Alley. Ngokusho kwedatha esemthethweni, isikhathi esinqunyiwe sokubeka inkimbinkimbi ukusebenza sabekwa ngumthuthukisi we-2018.
Mayelana nokufinyeleleka kwezokuthutha, kuzonikezwa imigwaqo emibili eseduze: i-Yaroslavsky ne-Altufevsky. I-LCD "I-Birch Alleys" itholakala cishe phakathi phakathi kwabo. Ibanga elisuka enkabeni yedolobha liqhele ngamakhilomitha ayishumi. Okuseduze yi-metro "I-Botanical Garden" futhi iziteshi eziningi zokuthutha zomphakathi ziyeka.
Kuthiwani ngokwayo okumele kuboniswe yi-LCD "Birch Alleys" emva kokuqedwa kokwakhiwa? Ekugcineni, i-block izoba nezakhiwo ezinhlanu zokuhlala, ngokusho kohlelo lomakhi olwakhiwe ukuze isikhala sangaphakathi esihlanganisiwe sakhiwe. Ingqikithi yinkimbinkimbi ithatha isakhiwo sezwe esingu-5.2 hectares. Zonke izindlu zakhiwa ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-monolithic, ama-facades alungiselelwe ukuba abe umoya wokushisa umoya, ukugoqa kwama-floor angaphezulu kuzokuba ne-panoramic.
I-LCD ephelele "Birch Alleys" inikeza ukuthenga izindlu ezingu-2137. Zonke zihlela ukukhululeka, okuvezwa kakhulu yamuva ngabathengi, njengoba kukuvumela ukuba uqaphele ngokushesha izinhlelo zakho zokuhlela ngemuva kokuthola: akudingeki ukuba uchithe izindonga. Izindawo zizohluka ngobukhulu. Okuncane kunazo zonke - amamitha ayisishiyagalolunye. Amakhulu kunawo wonke ayi-79 m 2 . Umthuthukisi uphinde wanikeza ama-niches akhethekile ama-air conditioners.
Ingqalasizinda yangaphakathi nangaphandle
Izitezi zokuqala zezakhiwo, njengezinye izakhiwo eziningi ezintsha, zihlelwe ukuthi zihanjiswe ezindaweni ezingekho zokuhlala ezithengiswayo. Kuzoba khona isitolo sezincwadi, isikhungo sokuzikhandla, isikwele sezinwele, i-cafe.
Abanikazi bezimoto zabo bazojabulela esikhathini esizayo ukupaka komhlaba ngaphansi kwezimoto ezingu-960. Kuzokusiza nokuba usebenzise uphahla lwakho ngangokunokwenzeka ngaphansi kwendawo yendawo. Izokwamukela indawo yokudlala nezemidlalo yezingane, indawo yokuzilibazisa yabantwana nabantu abadala. Yonke i-LCD yensiza yonjiniyela ye-LCD "Birch Alley" ihlelwe phansi futhi ibonwe yi-design landscape yangaphambili.
Ukuze kube nokuphila okunethezeka kakhulu kwabaqashi, umthuthukisi wezinto eziyinkimbinkimbi uhlome izinhlelo zokukhiqiza okuzenzakalelayo, umsebenzi ozolawulwa kuphela ekamelweni elilodwa lokulawula. Futhi kuyoba nemigqa ye-intanethi ye-fiber-optic, ithelevishini. Ukuphepha kwabanikazi benkimbinkimbi kuzohlinzeka nge-video ukubhekwa kanye nezinhlelo zokufinyeleleka kwe-elektroniki ezifakwe eceleni kwe-perimeter naseminyangweni yamakhamera.
Ngokuqondene nengqalasizinda yangaphandle, indawo eyinkimbinkimbi ngaphakathi kwedolobha inikeza izakhamizi zayo ithuba lokusebenzisa zonke izakhiwo zengqalasizinda zomphakathi ezitholakala endaweni elula. Lezi zikole ezimbalwa, ama-gymnasiums, kindergartens. Cishe amaminithi ambalwa kude nebhasibusithi kunama-hypermarket amakhulu enethiwekhi. Ngesikhathi esingaphansi kwekhilomitha eyodwa kukhona ingadi yezitshalo ezithuthukisa kakhulu isimo semvelo sendawo futhi ivumela izakhamuzi zenkimbinkimbi ukuba zijabulele umoya omsulwa nokuhlanzekile, ngangokunokwenzeka edolobheni elikhulu.
Ukubuyekeza mayelana ne-LCD "Birch Alley" manje kubhekisela ezimweni eziningi ekuthuthukiseni ukwakhiwa kwenkimbinkimbi. Njengoba kungakakhiwa, kunzima ukwahlulela ikhwalithi yamafulethi noma ukuqeda, izakhiwo zokuhlala ngokwabo kanye negceke. Abanentshisekelo balindele ngokulangazela ukuthunyelwa kwezikhungo.
Izindawo: ukubeka kanye nezindleko
Izindawo eziyinkimbinkimbi umthuthukisi ubikezele okuhlukahlukene kakhulu: igumbi elilodwa, igumbi elilodwa namakamelo amathathu. Amafulethi amancane okukodwa ayidlula amamitha ayisishiyagalolunye endaweni yawo. Ikamelo elikhulu kunazo zonke, elingu-ezintathu, lifinyelela okungaphezulu kwamamitha ayisishiyagalolunye angu-79.
Mayelana nezindleko zezindlu, lapha akusiyo eshibhile kakhulu. Intengo yemitha eyodwa yesikwele iqala ukusuka ku-ruble ayizinkulungwane ezingu-132. Kutholakale izindlu ezibizayo kakhulu. Zithengiswa nge-ruble ayizinkulungwane eziyi-155 ngesilinganiso esisodwa semitha yezindlu. Izindawo ezishibhile kakhulu zendabuko ezimbili namakamelo amathathu. Zithengiswa ngezindleko ezingenhla.
Ipasipoti ye-cadastral yendlu: kanjani ongayithola? I-Cadastral Chamber
Titanic Deluxe Belek 5 * (Turkey / Belek) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Njengoba currants entwasahlobo isivuno? Blackcurrant: Ukunakekela entwasahlobo. Uyabakhathalela currant kwentwasahlobo
Amathofi ekhaya: inhlanganisela ISIFISO bafunde nangendlela engokwemvelo. Indlela yokwenza toffee ekhaya: A ezihlukahlukene zokupheka
Ukuhlobisa izindlu mbumbulu. Zama ezihlukahlukene izinto
Inhlokodolobha Dhaka Bangladesh
Springs ku Insephe